Jawaari oo ka khudbeeyey shir Norway qabatay oo loga hadlay Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
31st July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo uu wehliyo Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa khudbad ka jeediyey shir looga hadlayey dardar gelinta Dimuqraadiyeynta Soomaaliyao ayadoo shirkanna ay ka qeybgaleen ergo ka badan 400 oo ruux.
Shirkan oo ka dhacay magaalada Trondheim ee dalka Norway ayaa waxaa sidoo kale ka qeybgalay islamarkaana khudbad ka jeediyey Ra’isulwasaarihii hore ee Norway Mr Bendevic oo isagu khudbaddiisa uga hadlay doorka ay Dowladda Norway ku laheyd hirgelinta hanaanka Dimuqraadiyadda Soomaaliya iyo taageerrada ay ku doonayaan in lagu dardar geliyo Dimuqraadiyadaas isaga oo si gaar ah u xusay iney Soomaaliya ka taageerayaan arimaha Axzaabta siyaasadeed iyo Doorashooyinka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo khudbad ka jeediyey shirka ayaa faah faahin ka bixiyey xaaladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan shaqooyinkii uu qabtay Golaha Shacabka Soomaaliya mudada Labada sano ah ee uu jiro, daruufaha adag ee lagu shaqeynayo iyo halka la hiigsanayo oo ah in dalkan la gaarsiiyo sanadka 2016ka doorasho xor ah taasi oo uu xusay iney ka go’antahay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo uu wehliyo Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamaanka ayaa kulan la qaatay haweeneyda ah Gudoomiyaha magaalada Trondheim Rita Ottervik oo uu kala hadlay xaalada ay guud ahaanba muslimiinta ku nool magaalada Trondheim, si gaar ahna Soomaalida magaaladaasi ku dhaqan.
Wasiir Beyle oo kulan qancin la yeeshay G. Arrimaha debadda ee baarlamanka